तपाईँ नयाँ सेक्सनहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ,हालको कागजातको अन्य कागजातमा सेक्सनहरूमा लिङ्कहरू. यदि तपाईँ सेक्सन लिङ्कको रूपमा घुसाउनुहुन्छ भने, लिङ्कको सामाग्री परिवर्तन हुन्छ जब तपाईँ स्रोत कागजात परिमार्जन गर्नुहुन्छ.
नयाँ सेक्सन घुसाउन:
तपाईँको कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ नयाँ सेक्सन घुसाउन चाहनुहुन्छ, वा पाठ चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ सेक्सनमा रूपान्तर गर्न चाहनुहुन्छ.
यदि तपाईँले पाठ चयन गर्नुभयो जुन अनुच्छेदहरू बीचमा प्रस्तुत भयो भने, पाठ स्वत: नयाँ अनुच्छेदमा रूपान्तर गरिन्छ.
घुसाउनुहोस् - सेक्सन रोज्नुहोस् ।
नयाँ सेक्सन बाकसमा, सेक्सनका लागि नाम टाइप गर्नुहोस्।
सेक्सनका लागि विकल्प सेट गर्नुहोस्, र घुसाउनुहोस्क्लिक गर्नुहोस्.
लिङ्कको रूपमा सेक्सन घुसाउन:
तपाईँले लिङ्कको रूपमा सेक्सन घुसाउनु भन्दा अगाडि, तपाईँले पहिला स्रोत कागजातमा सेक्सनहरू सिर्जना गर्न जरुरी छ.
तपाईँले लिङ्क गरिएको सेक्सनहरू समाविष्ट एउटा कागजात खोल्दा LibreOffice ले तपाईँलाई सेक्सनहरूको सामग्रीहरू अद्यावधिक गर्न प्रोम्प्ट गर्दछ . म्यानुअल तरीकाले लिङ्कलाई अद्यावधिक गर्नलाई, उपकरणहरू - अद्यावधिक गर्नुहोस् - लिङ्कहरू रोज्नुहोस्.
तपाईँ लिङ्क गरिएको सेक्सनहरू HTML कागजातहरूमा घुसाउन पनि सक्नुहुन्छ. जब तपाईँले वेब ब्राउजरमा पृष्ठ अवलोकन गर्नुहुन्छ, सेक्सनहरूको सामाग्री सेक्सनहरूको सामाग्रीमा अनुकूल गरिन्छ HTML कागजातको समयमा जुन अन्तिम बचत हो.
तपाईँको कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ लिङ्क गरिएको सेक्सन घुसाउन चाहनुहुन्छ.
लिङ्क(Link)क्षेत्रमा, लिङ्क(Link) जाँच बाकस चयन गर्नुहोस् । विण्डोज अन्तर्गत(Under Windows), तपाईँले स्रोत कागजातमा सेक्सन परिवर्तन गरेको बेलामा सेक्सनको सामग्रीहरू स्वचालित तरीकाले अद्यावधिक गर्नDDEजाँच बाकस पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छl
सेक्सन समावेश गरेको कागजात अवस्थित गर्नुहोस् जुन तपाईँ लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ, र घुसाउनुहोस् क्लिक गर्नुहोस् .
खण्ड बक्समा, तपाइँ सम्मिलित गर्न चाहानु भएको खण्ड चयन गर्नुहोस्।
घुसाउनुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।
सेक्सनहरू प्रयोग गर्दा
Title is: सेक्सनहरू घुसाउदा